Sidee ula siman tahay? - BBC News Somali
Sidee ula siman tahay?
18 Nofembar 2015
Xisaabiyahan BBC, waxaad ka eegi kartaa farqiga u dhexeeya lab iyo dheddig ee dalkaada, iyo kaalinta aad kaga jirtid sawirka weyn.
Waddankaada ku qor sanduuqa wax laga baaro si aad u heshid meesha uu kaga jiro sinnaanta lab iyo dheddig. Tirooyinka farqiga lab iyo dheddig waxay ku saleysan yihiin warbixin guddiga dhaqaalaha ee Bangiga Adduunka (WEF) oo ku cabbiraysa waddammada sida ay haweenku u muuqdaan inay si buuxda uga qayb galaan nolosha siyaasadda iyo dhaqaalaha ayna si siman uga qayb qaataan helitaanka waxbarashada iyo daryeelka caafimaadka.
Guddiga dhaqaalaha ee Bangiga Adduunka, Machadka tirakoobka ee Unesco, OECD
Habka wax loo sameeyay
In la soo saaro tirooyin muujinaya farqiga u dhexeeya lab iyo dheddig ee caalamka, guddiga dhaqaalaha ee Bangiga Adduunka waxaa uu lafaguray in ka badan 12 xirmooyin macluumaad ah oo la xiriira ka qayb gal dhaqaale iyo fursado, gaaritaan waxbarasho, caafimaad iyo badbaadid iyo awood siin siyaasadeed.
Kala horreynta waxaa lagu soo ururiyay xisaab laga qiyaas qaatay farqiga u dhexeeya lab iyo dheddig ee helitaanka dhaqaalaha iyo fursadaha waddan kasta gudihiisa. Arrintani waxay u suurta gelisay tusaha inuu is-barbardhigo waddammada qaniga ah iyo kuwa saboolka ah si siman.
Warbixinta sanadkan waa tii 10aad ee uu soo saaro guddiga dhaqaalaha ee Bangiga Adduunku waxayna ka hadlaysaa 145.
Xogta ku saabsan farqiga lab iyo dheddig waxaa laga helay Ururka Iskaashiga Dhaqaalaha iyo horumarinta (OECD). Tirada waddan kasta waa tii ugu dambaysay ee la heli karay waxay u dhexeysaa 2010-13.
Ururka OECD waxaa uu farqiga lab iyo dheddig ku qiyaasaa farqiga u dhexeeya lacagaha ay qaataan ragga iyo haweenka. Tirooyinka waxaa lagu qiyaasaa dadka waqti buuxa shaqeeya oo keliya.
Xogta qiyaasta dadka jaamacadaha ka soo baxay ee dheddiga ah waxaa laga helay Machadka tirakoobka ee hay'adda Unesco.